Diiwaanka Waxbarshada • Bogga 2 ee 2 • Daroogooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn waxbarashada
Cannabis iyo hal-abuurnimo: 3 waxyaabo ay tahay in la ogaado!
Jay Z oo ah heesaaga-heesaha-heesaa-ga ah ee reer Mareykan Jay Z ayaa ku dhibtooday inuu qoro ereyada heestiisa Izzo. Isku day aan tiro lahayn oo heesta ah ...
Muran? $ 300 si looga qaybqaato daraasad ku saabsan isticmaalka marijuana inta lagu jiro uurka iyo saamaynta carruurta
SEATTLE - Baarayaasha Jaamacadda Washington waxay qoranayaan haweenka uurka leh si ay u sahamiyaan saameynta isticmaalka marijuana ee dhalmada kahor horumarka ...
Waxaan rabaa inaan sumcad daro u sameeyo wada hadalka xashiishka - taasna waxay ka dhigan tahay, qayb ahaan, inaan xaqiiqooyin u siiyo bulshada caafimaadka
Daraasad tijaabo ah oo ugu horreysay ayaa hadda lagu qabtaa Australia iyadoo la adeegsanayo waxtarka xashiishadda daawada iyada oo lagu daaweynayo ...
Baarayaasha Israel waxay muddo tobanaan sano ah baarayeen isticmaalka faa iidada ugu dhow ee xashiishka - halka Mareykanku uu muddo dheer ...
Xashiishku wuu ka badan yahay helitaanka "sare". Sida hiwaayadaha sida biirka farshaxanka, bowling ama kalluumeysiga duullimaadka - waa iska caadi ...
Waxbarashada sare: cannabis sida waxbarashada kuleejka
Ardaydu waxay baranayeen xashiishadda si aan rasmi ahayn sanado. Hadda jaamacaduhu waxay bilaabeen inay bixiyaan barnaamijyo barashada xashiishka maxaa yeelay, waad ogtahay, marijuana waa halka ay ku taal ...
cannabis, Wararka, Nafaqeyn
Kuleejka bulshada ee bilaabay barnaamijka farshaxanka cunnada ee 1981 si loogu tababaro kuugga loogu talagalay casinos Atlantic City ayaa diyaarinaya…